Xildhibaan Jeesoow: “Waa Been ma fashilmin shirka Jowhar” | Baydhabo Online
Xildhibaan Jeesoow: “Waa Been ma fashilmin shirka Jowhar”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa beeniyay in uu fashil ku dhow yahay shirka maamul u sameynta Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo dhawaan wajigiisa labaad ka furmay Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabeelaha Dhexe .
Mudane Jeesow ayaa tilmaamay in aysan jirin wax caqabado ah oo hortaagan shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe isagoo tibaaxay in Odayaasha dhaqanka labada Gobol ay haatan ku howlan yihiin soo xulista Ergooyinka u matalaya shirkaasi.
Dhinaca kale Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa waxa uu qeexay in Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda labada Gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay mar weliba kulamo ka yeeshaan xallinta Mad madowga ka dhex aloosan arrimaha shirkaasi jowhar ee maamul u sameynta labada Gobol.
Sidoo kale Jeesow ayaa carabka ku adkeeyay in ay ku guda jiraan haatan qorshe ku aadan sidii ay ugu cid diri lahaayeen duubabka dhaqanka ee aan soo xaadirin shirkaas kuwaas oo wax tabanaya.
Dhawaan ayey ahayd markii Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in dadaal ay u gali doonto sidii muddo 30 cisho ay ugu soo gaba gabeyn lahayd shirkaasi walow ay qaadacsan yihiin shirka qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda Gobolka Hiiraan.